Ahoana no fanasana sy fanadiovana tsara ny saron-tava ny tarehy
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ahoana no fanasana sy fanadiovana tsara ny saron-tava ny tarehy
Aprily 10, 2020
Ahoana ny fanadiovana ny saron-tava ny tarehy
Mandritra izay Areti-mifindra COVID-19, rehefa samy manao, mividy ary ny tena zava-dehibe dia mifatotra masom-basy alohan'ny hivoahana any ivelany hamita ny asa lehibe ataontsika, dia misy ny fanontaniana lojika: "Ahoana no fanasana sy fanadiovana tsara ny saron-tarehy, ary impiry aho?"
Niresaka tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety City sy County of Honolulu farany teo, ny dokotera dokotera vonjy maika any Kuakini Dr. Darragh O'Carroll dia nanolo-kevitra ny hanasa sarontava rehefa vita ny fitsidihana rehetra.
Sasao tsara amin'ny tanana izy ireo amin'ny savony sy rano mafana na amin'ny milina fanasana miaraka amin'ny hafanan'ny rano ambonin'ny 160 ° F.
Mba hanamainana maska ​​aorian'ny fisasana dia ampitao amin'ny lamba fanamainana mafana izy na ahantona any ivelany amin'ny tara-masoandro UV.
Raha tsy afaka manasa sy manadio maska ​​ny tarehy avy hatrany ianao aorian'ny fampiasana azy dia apetraho ao anaty harona plastika mihidy mandra-pahatongan'ny fampiasana manaraka.
Raha tsy efa nampianarin'ny dokotera anao ianao, dia alao antoka fa vita amin'ny lamba ny sarontava anao - ny N-95 ary ny sarontava fandidiana dia tokony hatokana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana.
Ahoana no ahafahantsika rehetra manampy ireo mpiasan'ny fahasalamana
"Toy ny vondrom-piarahamonina iray miomana amin'ny tondra-drano ho avy, manangona loharanon-karena 'sandbags' izahay mba hanakanana ny tampon'ilay valan'aretina COVID-19 any Hawaii," hoy i Hilton Raethel, filoha sady CEO an'ny Fikambanana Healthcare Association of Hawaii (HAH). “Ary afaka mandray anjara ny tsirairay.”
Ankoatry ny fanasan-tanana sy ny fanalavirana ara-batana hampiadana ny fifindran'ny otrik'aretina, nilaza i Raethel fa afaka manohy manampy ny olona amin'ny fanaovana sarontava lamba ary manome fitaovam-piarovana manokana (PPE) ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamantsika eo amin'ny lohalaharana.
HAH, izay mpikambana ao aminy dia ahitana hopitaly be pitsaboana any Hawaii, toeram-pitsaboana mahay, trano fandraisam-bahiny, toeram-ponenana manampy ary orinasa hafa mifandraika amin'ny fahasalamana, dia voampanga amin'ny fitantanana sy fizarana tahiry stratejika Hawaii an'ny PPE amin'ny alàlan'ny Hawaii Healthcare Emergency Management.
"Maheno mivantana avy amin'ny mpiasan'ny hopitaly izay miasa haingana araka izay tratrany izahay mba hiarovana ny mpiasan'izy ireo, ary samy manana ny filany hafa avy izy ireo," hoy i Raethel. “Manampy amin'ny fandrindrana izany izahay, ary tsy miasa irery. Ny Departemantan'ny Fahasalamana any Hawaii sy ireo mpiara-miombon'antoka maro amin'ny governemanta sy ny fiaraha-monina dia miara-miasa hiaro ny fanomezana PPE eo amin'ny laharana voalohany. ”
"Toa mamirapiratra amin'ny krizy hatrany ny mponin'i Hawaii," hoy i Raethel. “Ary ho an'izay rehetra manampy amin'ny fanaovana PPE na manome bebe kokoa, dia manolotra 'Mahalo' amin'ny fo aho.” Mazava ho azy fa ankasitrahana hatrany ny fanampiana ampahibemaso bebe kokoa. Raethal dia nizara fomba vitsivitsy ahafahantsika rehetra manampy ny hopitaly ilain'izy ireo amin'ny filan'ny PPE dieny izao.